Wasaaradda Boostada oo ku dhawaaqday in si rasmi ah loo billaabay adeegyadii astaanta Qaran ee internet-ka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Wasaaradda Boostada oo ku dhawaaqday in si rasmi ah loo billaabay adeegyadii...
Wasaaradda Boostada oo ku dhawaaqday in si rasmi ah loo billaabay adeegyadii astaanta Qaran ee internet-ka
Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknolojiyada ayaa ku dhawaaqday in si rasmi ah loo billaabay adeegyadii astaanta internet-ka ee qaranka Soomaaliyeed (dotSO) ee loogu talogalay wasaaradaha iyo hay’adaha kale ee dawladda.
Arrintan ayaa qeyb ka ah dadaallo is daba joog ah oo qeyb ka ah qorshe 90 maalmood ah, oo ay ansixiyeen Golaha Wasiirrada, kaasi oo ay Wasaaraddu ku dooneyso inay adeeggaas uga dhigto mid si buuxda uga hawl-gala gudaha Wasaaradda.
Bishii May ee sanadkan waxaa si rasmi ah u billowday in dhammaan wasaaradaha dawladda loo sameeyo emails leh astaanta dowladda ee (.gov.so). Marka la dhammeeyo adeegyada hay’adaha federaalka, waxaa qorshaha ku jira sidii adeegga dotSO loo gaarsiin lahaa dawlad-goboleedyada, shirkadaha, waxbarashada iyo guud ahaan shacabka, si muwaadiniintu uga faa’iideystaan adeeggan ay xaqa u leeyihiin.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta & Teknolojiyada, Mudane Eng Cabdi Cashuur Xasan, ayaa sheegay in isla markii uu xilka la wareegay inuu mudnaanta 1aad ka dhigtay in adeegga astaanta qaranka ee internetka uu si habsami leh uga shaqo billaabo dalka, isagoo hoos imanaya wasaaradda. “Waxyaabo badan ayaa noo hirgalay muddo kooban gudaheed. Waxaan u mahad celinayaa Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Golaha Wasiirrada oo nagu taageeray qorshaha aan arrintan u sameynay iyo cid kasta oo nagala shaqeysay hawshan.”
“Astaanta qaranka ee internet-ka waa aqoonsiga aan ku leenahay internet-ka. Haddii aan isticmaalno waxaan muuqaal wanaagsan ka bixineynaa wasaaradaha iyo hay’adaha kale ee aan matalno iyo guud ahaan dawladdaba. Haddaba waxaan ku wargelineynaa dhammaan hay’adaha dawladda inay soo dalbadaan cinwaanno (domains) iyo email-o shaqo,” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay wasiirka.
Previous articleMadaxwaynaha oo booqday xerada ciidanka maleteriga Soomaaliya ee Magaalada Kismaayo: Sawiro
Next articleCabdifataax Shaawey oo loo magacaabay agaasime ku xigeenka Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha